२०२० टेक्नोलोजी ट्रेंड्स जसले हाम्रो जीवनलाई सदाको लागि बदल्छ - Print Peppermint
अमेरिकी डलरAD CAD€ EUR£ जीबीपी
२०२० टेक्नोलोजी ट्रेंड्स जसले हाम्रो जीवनलाई सदाको लागि परिवर्तन गर्दछ
अप्रिल 21, 2020 | व्यापार, स्वरोजगार, सुरूवात
प्रतिस्पर्धी रहनको लागि लालसा, आयलाई बढावा दिन, एक ब्रान्ड र विश्वास निर्माण गर्न, ग्राहक अनुभव बृद्धि गर्न, तपाईं डिजिटल-प्रेसिलो हुनु आवश्यक छ। यस लेखमा हामी समीक्षा गर्नेछौं Technology प्रविधि प्रवृत्ति २०२० त्यो चाँडै हाम्रो जीवन र व्यवसाय परिवर्तन हुनेछ। तयार छ वा छैन, टेक क्रान्ति यहाँ छ। त्यसो भए, यसलाई वेवास्ता गरौं शीर्ष अनुरोध गरिएको २०२० मा तपाईंको परियोजनामा ​​लागू हुने समाधानहरू।
२०२० मा हेर्नको लागि शीर्ष टेक ट्रेंडहरू
टेक्नोलोजीहरू द्रुत रूपमा विकसित। वर्तमानमा, धेरै सफलता टेकहरू, उपकरणहरू, र समाधानहरू प्रस्तावमा छन्। सबै चुनौतीहरू र नवाचारहरूलाई ट्र्याक गर्न यो चुनौती हो। यहाँ हामी हाम्रो सूचीको साथ छौं २०२० मा हेर्नको लागि पाँच उभरने प्रविधिहरू। त्यसोभए, यदि तपाईं कुन प्रविधिहरूबारे जान्न चाहनुहुन्छ र अधिक उत्पादक, प्रभावकारी र सफल हुनको लागि लगानी गर्नुपर्दछ, त्यसो भए जारी राख्नुहोस्!
एक पूरा मोबाइल अनुभव
हाल, तपाइँको उत्पादन को एक अनुकूलन संस्करण अब एक सिफारिश हैन तर एक पर्छ-छ। उत्तोलन मोबाइल मार्केटिङ तपाइँका उपभोक्ताहरूको मागहरू पूरा गर्न। तपाईं उत्पादन को उत्तरदायी भाग मा जाँच गर्नुभयो। यो उच्च गुणस्तर, प्रयोग-गर्न सजिलो र राम्रो देखिन्छ कि कुनै ग्याजेट प्रयोग गरिएको छैन। यो ग्राहकको अनुभव सुधार गर्न महत्वपूर्ण छ।
यसैले तपाईं अनुकूलन डिजाइन वा अग्रिम मोबाइल नेटिभ अनुप्रयोगको विकासको बारेमा सोच्न आवश्यक छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि उच्च गुणवत्ताको दृश्य सामग्री प्रयोग गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं एक मनमोहक वेबसाइट र / वा एप्लिकेसन एचडी छविहरू, एनिमेशन, भिडियोहरू, र अन्य ग्राफिक डिजाइन थप्न बिना सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न।
यसैले, एक को उपयोग गरेर एनिमेसन निर्माता जस्तो क्रेल्लो जस्तो कार्य पहिले देखिने भन्दा बढी सजिलो हुन्छ। उदाहरण को लागी, यो उपकरण तपाइँ संग प्रदान गर्दछ 8,000 + एनिमेटेड डिजाइन र गति ग्राफिक्स, 500,000 + प्रीमियम छविहरू, 25,000 + तयार टेम्पलेट्स, र अन्य दृश्यहरू जुन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एक सेवाको रूपमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एआईएएस एक चपल समाधान हो जुन तपाईंले २०२० को लागि तपाईंको व्यवसाय योजना डिजाईन गर्दा तपाईंले ध्यानमा राख्नुपर्दछ। कल्पना गर्नुहोस्, यो आशा गरिन्छ कि यस टेक्नोलोजीको लागि कुल वैश्विक राजस्व लगभग हुनेछ $ 118.6 अर्ब २०२2025 मा। तपाईंको प्रोजेक्टमा उपकरण निर्माण गर्दै, तपाईं लाभहरूको दायरा प्राप्त गर्नुहुन्छ जस्तो:
कार्यहरू आउटसोर्स गर्ने क्षमता;
एआई आउटसोर्सिंगको तेस्रो-पक्ष प्रस्ताव गर्दै, तपाईं समाधानको सबै फाइदाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ अतिरिक्त लागत आवश्यक पर्दैन र कम जोखिम समावेश सहित।
उच्च टेक्नोलोजीले हाम्रो जीवनको सबै पक्षहरूलाई असर गर्‍यो: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, किनमेल, काम, आराम, र मनोरन्जन। अभिनव समाधानलाई धन्यवाद सबै चीज सरलीकृत र सुधारिएको छ। जे भए पनि, अपराध, धम्की, ह्याकरहरू नयाँ स्तरमा पनि सारिए। सुरक्षा र सुरक्षाको बारेमा सोच्नको लागि यो नै कारण हो।
हाल, अनलाइन बैंकि।, क्लाउड-आधारित अनुप्रयोगहरू, टेलिमेडिसिन प्रोग्रामहरू, र уму वेबसाइटहरूले निजी र कहिलेकाँही संवेदनशील डाटाको टन स collect्कलन गर्दछ। यो सबै व्यक्तिगत जानकारी चोरी, दुरुपयोग, र अन्य धोखाधडी बाट रक्षा गर्न महत्वपूर्ण छ। Cybersecurity उपकरण र विभिन्न उन्नत समाधानहरू जस्तै ब्लकचेन यस अवस्थामा तपाईंको उद्धार हो। तपाइँको उत्पादन मा उपकरणहरू निर्माण गर्नुहोस् DDoS आक्रमणहरू र / वा डाटा लीकको लागि अनुमति नदिनुहोस्.
प्रयोगकर्ताको अनुभवको सुधारमा केन्द्रित हुनु, ग्राहक डेटा जम्मा गर्नु र विश्लेषण गर्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसैले, तपाइँ तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा जानकारी स collect्कलन गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई अफरहरू र सेवाहरू निजीकृत गर्न सिक्न।
विश्लेषण आयोजित गर्न एक अनिवार्य मुद्दा हो। यद्यपि, सहि समाधानको मद्दत बिना नै सहि र सही तरिकाले गर्न यो साँचो चुनौती हुन सक्छ। यो यस्तो राहत हो कि आजकल त्यहाँ धेरै क्लाउड-आधारित संज्ञानात्मक सेवाहरू र परिष्कृत उपकरणहरू छन् जुन प्रयोगको लागि प्रयोगको लागि प्रयोग गरियो। तसर्थ, तपाईं छिटो र अधिक कुशलतापूर्वक निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यद्यपि प्रविधिहरूको द्रुत विकास र सेवाहरूको डिजिटलाइजेशन भए पनि मानिस अझै पनि कामको थोक गर्न आवश्यक छ। र तपाईंको कम्पनीको सफलता वा असफलता तपाईंको टीममा धेरै निर्भर गर्दछ। जे होस्, उच्च प्रविधिहरूको कारण, उत्तम भाँडाको लागि खोजीको प्रक्रिया सरल र अधिक कुशल हुन्छ।
यसैले मानव संसाधन सफ्टवेयर समाधान एक राम्रोसँग हुनुपर्दछ। उपकरणहरूले तपाईंलाई वास्तविक-समय डाटा प्रदान गर्दछ जुन निर्णय लिने निर्णयको लागि महत्वपूर्ण हो साथै स्टाफको लागि उत्तम समग्र अनुभव सिर्जना गर्दछ। त्यस्ता एचआर टेक्नोलोजीहरू निम्न मुद्दाहरूको साथ तपाईंलाई मद्दत गर्न बाध्य छन्:
भर्ती र भर्ती;
कर्मचारीहरूको थप संलग्नता;
स्टाफको चलिरहेको प्रशिक्षण
HRMS, HRIS, र HCM केहि प्रणालीहरू बजारमा उपलब्ध छन्। त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू उपलब्ध छन्। समाधानको सहि छनौट गर्नको लागि तपाईंको कम्पनीको आवश्यकताहरू पूरा गर्न मुख्य सुविधाहरू अनुमान गर्नुहोस्।
पक्कै, यी Top शीर्ष प्रविधि प्रवृत्ति माथि वर्णन गरिएको छ प्रमुख तर २०२० मा मात्र ध्यान दिन गाह्रो छ। बहु-क्लाउड, कुराकानी, G जी, ब्लकचेन अन्य समाधानको साथ तपाईंको ध्यान र लगानीको पनि योग्य छ। डिजिटल रूपान्तरण तपाईंको लागि महत्वपूर्ण छ यदि तपाईंको लक्ष्य प्रतिस्पर्धी, कुशल र उत्पादक हो।
अनुमान गर्न नबिर्सनुहोस् कुञ्जी विशेषताहरू तपाइँको व्यवसाय उद्देश्य र तपाइँका कामदारहरूको लागि उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्न, कार्य सुधार गर्न, केहि कार्यहरू समाधान गर्न, र निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक छ।
Business तपाईको ब्यापार कार्डहरूका लागि नयाँ डिजाइन इन्सिपो
कसरी लोगो डिजाइन गर्ने: Most सबैभन्दा आधारभूत नियम →